FAQ General - SHENZHEN KAISHENG pcb., LTD
Pcb Kugadzira FAQs:
Chii chinonzi PCBFuture?
PcbFuture inogadzirwa nehunyanzvi hwepasi rese ichipa PCB nhema, gungano rePCB uye zvikamu zvekutsvaga masevhisi.
Ndeupi mhando pcb mabhodhi iwe kugadzira?
PCBFuture inogona kuburitsa akawanda maPCBs senge imwechete / maviri-mativi maPCB, multilayer PCBs, Rigid PCBs, Flexible PCBs uye Vanomira-flex pcbs.
Une zvishoma odha uwandu (MOQ) kuti pcb mirairo?
Kwete, yedu MOQ yePBB yekugadzira ndeye 1 chidimbu.
Iwe unopa Mahara Pcb Samples?
Hongu, isu tinopa Mahara pcb sampuli, uye iyo qty haina anopfuura mashanu pcs. Asi isu tinofanirwa kubhadharisa iwo masampuli kutanga, uye kudzorera iyo pcb sampuro mutengo mune yako yakawanda kugadzirwa kana yako sampuli odha kukosha kwete inopfuura kuwanda kwekugadzira kukosha kwe1% (Pasina kusanganisira kutakura).
Ndingaite sei kuti ndiwane chimbi chimbi?
Iwe unogona kutumira mafaera kune yedu email kutengesa @ pcbfuture yekotesheni, tinogona kukunongedzera kwauri mumaawa gumi nemaviri zvakajairika, nekukurumidza kunogona kuve maminetsi makumi matatu.
Ndinogona here kuve nemabhodhi angu akagadzirwa mumapaneru?
Hongu, tinogona kushanda pamwe chete pcb mafaira uye kugadzira mapuranga mune ukomba.
Ini ndinogona kungoisa iyo pachena PCB pc?
Ehe, isu tinogona chete kupa nePCB yekugadzira sevhisi kune vatengi vedu.
Nei uchishandisa iko online quote service
Pcb online online quote inongoshandira mutengo wakashata uye nguva yekutungamira, isu tinofungidzira mune yepamusoro pcb kugadzirwa, saka yakadzama DFM cheki uye kurongeka kwakakosha. Isu tinoomerera pakubatanidzwa kwemuchina uye reruoko basa kudzikisira vatengi dhizaini yengozi.
Sei kuverenga vatungamirire nguva pcb kugadzirwa?
Pcb yekuraira inotungamira nguva ichaverengerwa mushure meese maEQs ePCB ekugadzira agadziriswa. Nezve zvakajairwa kutendeuka mirairo, kuverenga kubva rinotevera zuva rekushanda sezuva rekutanga.
Iwe unayo iyo DFM yekutarisa dhizaini yedu?
Ehe, isu tinokwanisa kupa neyemahara DFM sevhisi kune ese maodha.
Turnkey pcb gungano FAQs:
Iwe unopa prototype PCB gungano (yakaderera vhoriyamu)?
Ehe, isu tinogona kupa ne turnkey pcb gungano prototype sevhisi uye yedu MOQ iri 1 chidimbu.
Ndeapi mafaira iwe aunoda pcb gungano odha?
Kazhinji, tinogona kutora mutengo kwauri kubva pamaGerber mafaera uye BOM runyorwa. Kana zvichibvira, Sarudza uye isa mafaira, gungano kudhirowa, yakakosha chinodiwa uye mirairo zviri nani kuti prvoide nesu zvakare.
Iwe unopa emahara prototype PCB musangano webasa?
Ehe, isu tinopa yemahara prototype pcb musangano webasa, uye iyo qty haina anopfuura matatu pcs. Asi isu tinofanirwa kubhadharisa iwo masampuli kutanga, uye kudzorera iyo pcb sampuro mutengo mune yako yakawanda kugadzirwa kana yako sampuli odha kukosha kwete inopfuura kuwanda kwekugadzira kukosha kwe1% (Pasina kusanganisira kutakura).
Chii chinonzi Pick uye Nzvimbo faira (Centroid faira)?
pick uye nzvimbo faira inonziwo Centroid faira. Iyi dhata, inosanganisira X, Y, kutenderera, bhodhi (kune kana pasi chikamu chikamu) uye dhizaini dhizaini, inogona kuverengwa neSMT kana thru-hole gungano michina.
Iwe unopa Turnkey PCB musangano webasa?
Ehe, isu tinopa turnkey pcb yegungano rebasa, iyo inosanganisira maSeketi mabhodhi kugadzirwa, Zvikamu zvinonwisa, Stencil, uye PCB Vagari uye kuyedzwa.
Nei zvimwe zvezvinhu zvekutsvaga mutengo kubva kwauri zvakakwirira kupfuura izvo kana uchitenga nesu?
Zvemagetsi zvinounzwa kuChina zvinofanirwa kuwedzera 13% VAT uye zvimwe zvacho zvinofanirwa kubhadhariswa Mutero, izvo zvakasiyana neHS kodhi yechikamu chimwe nechimwe.
Nei zvimwe zvezvinhu zvekutsvaga mutengo kubva kwauri zviri zvakaderera pane mutengo unoratidza mumawebsite ekuparadzira?
Isu tinoshanda nevazhinji vanoputira vanozivikanwa saDigi-Key, Mouse, Arrow uye nezvimwe, sezvo yedu hombe yegore yekutenga huwandu, ivo vanotipa isu yakaderera kwazvo dhisikaundi.
Inguva yakareba sei iwe unoda kutora iyo Turnkey PCB mapurojekiti?
Kazhinji zvinotora mazuva 1-2 ekushanda kuti titore mapurojekiti egungano. Kana iwe usina kugamuchira chitaurwa chedu, unogona kutarisa yako email bhokisi uye jun folda kune chero email inotumirwa kubva kwatiri. Kana pasina maemail anotumirwa nesu, ndokumbirawo ubate sales@pcbfuture.com kuti ubatsirwe.
Unogona here kusava nechokwadi nemhando yezvinhu zvePCB yedu?
Neruzivo rwemakore, PCBFuture yakavaka zvinhu zvakavimbika zvekutsvagisa chiteshi nepasirese-vanoziva vanogovera kana vagadziri Tinogona kuwana yakanyanya tsigiro uye mutengo wakanaka kubva kwavari. Uyezve, isu tine timu yekudzora mhando yekuongorora uye kuongorora mhando yezvinhu. Iwe unogona kuzorora nekuda kwehunhu hwezvinhu.
Ini ndinogona kuve nechikwereti account?
Kune vatengi venguva refu vanoshanda pamwe nesu kweinopfuura mwedzi mitanhatu uye neakajairwa mirairo mwedzi wega, isu tinopa account yechikwereti ine 30-mazuva ekubhadhara mazwi. Kuti uwane rumwe ruzivo nekusimbiswa, ndapota taura nesu uye tichadzoka kwauri nekukurumidza.